Akako lesona ny tsy fahombiazako – Blaogin'i Voniary
Tsy ary hizotra araka izay eritreretinao avokoa akory ny fiainana fa indraindray mety tojo tsy fahombiazana. Tsy tokony atao ahakivy anefa izany fa fombany ihany. Mitrakà, mandraisa lesona, ary tohizo ny lalanao dia ho mpandresy hatrany ianao.
Ilaina koa ny tsy fahombiazana
Misy ohabolana Malagasy manao hoe: “soa lavo hahay hamindra, soa kenda hahay hitsako”. Rehefa mianjera indray mandeha manko ianao ka naharary anao iny dia hitandrina ianao amin’ny manaraka ary toy izany koa raha kenda, hiezaka hitsako miadana ianao mba tsy hiverenan’izany. Azoko antoka fa nianatra bisikileta koa ianao io tamin’ny fahakely e! Impiry ianao no nianjera? Maromaro ihany izay hoy ilay tsy mahay manisa! Ireny fotoana ireny indrindra no nanosika anao hikiry mba hahafehy ilay bisikileta. Ary ireny fotoana ireny koa raha nitomany ianao no nahatsapanao ny fitiavan’i dada sy neny na i zoky nanambitamby anao sy nampiarina anao. Tsarovy fa toy izany koa amin’ireo tetikasa na vinavina nokasainao nefa tsy nahomby. Misy lesona azo tsoahina amin’ireny mba anatsarana izay atrehinao amin’ny manaraka ary indrindra koa, eo ireo akaiky anao, vady aman-janaka, ray aman-dreny, namana sy havana izay tena tia anao manohana anao hatrany.
Zaza mianatra bisikileta
Inona no lesona azo tsoahina?
Apetraho lalandava io fanontaniana io rehefa misy tsy nahomby izay nataonao? Raha tetikasa tsy nandeha amin’ny nieritreretana azy, traikefa ho anao iny amin’izay kasainao manaraka, nahafantaranao izay mety tokony hotohizana ary izay tsy mety tokony hajanona. Raha olona nandalo teo amin’ny fiainanao ka nahatsapanao ny mangidy na amin’ny resaka asa io, na resaka fiarahan’olon-droa aza manaiky ho nijaly sy very fotoana tamin’ireny fotsiny fa makà lesona.
Ny ahy izao, tamin’ny niasako taloha, nisy an’izay lehibeko izay tsy mitsahatra manakiana na dia efa tsapako hoe manao izay tratry ny heriko rehetra aho amin’ilay asa. Fa ny tena tadidiko dia ilay fotoana nanaovana tomban’ezaka faran’ny taona: efa nieritreritra hoe nahavita zavatra tsara aho tamin’izay saingy tsy izany no nitranga. Kiana variraraka no azoko taminy, ary ny fomba nanaovany azy dia tao amin’ny efitra fivoriana, eo amin’ilay latabatra efajoro lavalava iny, izy mipetraka migalabona eo amin’ilay lavany ary izaho mipetraka mipirimpirina eo amin’ilay sakany. Azoko veroka fa efa nokajiany tamin’ny antsipirihany na ny teny na ny fomba firesaka sy ny fomba fifanatrehanay, dia izany rehetra izany no niara-nifarimbona ka nahavoadona mafy ny saiko. Lesona azoko notsoahina ary ezahiko ampiharina: misy lanjany lehibe ireo hafatra tsy an-teny ary miantraika tokoa any amin’ilay ampitana hafatra, ohatra ny fomba fihetsika, ny fijery ary ny toerana sy ny manodidina amin’ilay fotoana iresahana iny.
Jack Ma, ilay lehilahy manan-karena indrindra any Chine
Jack Ma – Tompon’ny Alibaba
Singaniko manokana i Jack Ma satria anisan’ireo tsy menatra miteny hoe nisy lesoka ny nataony taloha. Izy no tompon’ny Alibaba, tranonkala fivarotana vokatra sinoa, malaza eran-tany ary mampidi-bola be amin’izao. Taona maro talohan’io anefa, efa nanokatra ny China Page izy nanaovany mitovy amin’io saingy tsy nahomby izany. Hainy ny naka lesona sy nifikitra tamin’ilay nofinofiny ary mbola miteny izy hoe misy andrana tsy mety koa indraindray ao amin’ny Alibaba fa manohy ny diany sy mijoro hatrany izy ireo. Hoy izy “ankehitriny, te-hanoratra momba ny fahombiazan’i Alibaba ny olona. Izaho anefa mahita hoe tsy narani-tsaina be izahay tamin’izany, betsaka ny tsy nety tamin’ny paikady nataonay ary azo lazaina mihitsy hoe vendrana izahay. Ka indray andro any, izaho manokana, ny tiako hosoratana dia ireo lesoka miisa 1001 an’i Alibaba”.
Hoy Ny Antsaly “tsy misy tsy diso izay mandia amin’ny tany, fa izay mivarilavo no adala indrindra”. Koa aza atao sakana tsy hirosoanao sy hanatsarana ny fiainanao ankehitriny ireo fahadisoanao na tsy fahombiazanao taloha.
fahaiza-miaina, faharetana, fahombiazana, lesona azo tsoahina, mpandresy ianao, toe-tsaina mpandresy, tsy fahommbiazana
2 commentaires sur “Akako lesona ny tsy fahombiazako”
Monany dit :
Raha tsy potraka ( saika vaky loha ) dia angamba tsy mbola mahay bisikileta izaho ! ( 12 taona izaho tamin’ny taona 1960 tany Ambatondrazaka!)
Saika vaky loha mihitsy ve! Fa ny tombontsoany izany izao dia mahay ianao!